Isibuykezo se Zodiac Bet sase-Ningizimu Afrika 100% ize ifike Euro 1,000
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-zodiac bet casino online ne-mobile
Isibuyekezo se-Zodiac Bet Casino Online ne-Mobile
Isofthiwe:Microgaming, NetEnt, Betsoft, Evolution Gaming, Big Time Gaming
Ibhonasi Lokukwamukela:125% Webhonasi Elinganayo Ize Ifike R2210
I-Zodiac Bet Casino yikhasino ye-inthanethi yakamuva engakwenza ukuthi ucele izinkanyezi zakho ezinenhlanhla. Isungulwe ngo-2020, i-Zodiac Bet ingenye yezinhlobo ezintsha zendawo ze-iGaming ehlanganisa imidlalo yasekhasino nezici zokubhejela ezemidlalo, njengoba kufakazelwa wuphawu (logo) lwebhola eliphakathi kwesondweni le-zodiac. I-Zodiac Bet ifuna ukunika abadlali okuhle kuzinhlangothi zombili – ilabhulali enkulu yekhasino kuzo zonke izigaba zemidlalo, kanye ne-sportsbook yamazwe omhlaba esebenzela izimakethe ezahlukahlukene, kanye nemidlalo edijithali ye-TV.
Abadlali bangazulazula elabhulali ebanzi yemidlalo engaphezulu kwengu-2 800 equkethe ama-slot, imidlalo yetafula, i-poker yevidiyo, ikhasino ebukhoma, nemidlalo engajwayelekile. Uma izinkanyezi zakho zenhlanhla zinawe, ungashaya ne-jackpot ecebile, ekhula njalo (progressive). Imidlalo ivela kubahlinzeki besofthiwe abangu-42 abafunwa kakhulu abashintsha ukwakheka kwendawo ye-iGaming ngezindlela zabo. Abavelele phakathi kwabo yi-Microgaming,i-NetEnt,i-BetSoft, i-Evolution, i-Big Time Gaming, ne-Play’n Go, njll.
Ababhejela ezemidlalo bangalandela amaligi abawathandayo babhejele amaqembu abo, abadlali nezinto ezenzakala phakathi komdlalo. I-Zodiac Bet iyipulatifomu yemidlalo ethembekile, ephatha abadlali kahle, futhi ivikeleke kakhulu. Le midlalo ihlolwa njalo ukuletha imiphumela efanele ngabacwaningi mabhuku abazimele. Imininingwane ebucayi yamalungu iphephe ngokuqinile ngemuva kobuchwepheshe be-SSL obusetshenziswa embonini. Yize i-Zodiac Bet iyikhasino yamazwe omhlaba wonke, ihlose ikakhulukazi abadlali abavela e-Canada nasemazweni aseYurophu. Ngakho-ke, ingabe ikhasino inobungane neNingizimu Afrika? Funda kabanzi.
2021 Amabhonasi okukwamukela e-Zodiac Bet Casino
Idiphozithi yokuqala Idiphozithi yokuqala Ibhonasi Elinganayo ka-125% ize ifike ku-EUR 125
Idiphozithi yesibili Ibhonasi Elinganayo ka-75% ize ifike ku-EUR 250
Idiphozithi yesithathu Idiphozithi yesithathu Ibhonasi Elinganayo ka-50% eze ifike ku-EUR 400
Idiphozithi yesine Ibhonasi Elinganayo ka-100% ize ifike ku-EUR 225
Sebenzisa ikhodi yebhonasi ZBWEL125, ZBWEL250, ZBWEL400, no-ZBWEL225 kudiphozithi 1, 2, 3, kanye no-4 ngokulandelana. Inani elincane lokubheja ukuze ufanelekele ukuthola amabhonasi ngu-EUR 20, futhi idiphozithi nebhonasi kufanele igingqiwe izikhathi ezingaphezulu kwezingu-40 ngaphambi kokukhishwa kwanoma yikuphi okuwinile.
Amakhodi Ebhonasi Yediphozithi Engekho e-Zodiac Bet Casino
I-Zodiac Bet Casino ayinikeli nganoma iyiphi ibhonasi yediphozithi engekho okwamanje. Ungaqiniseka ukuthi lesi sigaba sizobukezwa uma kunamabhonasi.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Zodiac Bet Casino
Ibhonasi Yokudiphozitha Futhi Ibhonasi Elinganayo ka-50% eze ifike ku-EUR 200
Sebenzisa ikhodi yekhuphoni ZBRELOAD ukuthatha iphromoshini ngediphozithi encane ka-EUR 20. Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali zingu-40x ibhonasi kanye nediphozithi. Ukudlalwa kufanele kuqedwe kungakapheli izinsuku ezingu-21.
Indlela Yokungena Ngemvume Nokubhalisa e-Zodiac Bet Casino
Ama-tab oku ‘Ngena Ngemvume’ noku ‘Bhalisa’ atholakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwewebhusayithi yekhasino. Ungangena noma uvule i-akhawunti ngefomu elitholakala engxenyeni engezansi yekhasi lasekhaya.
Faka imininingwane yakho bese ukhetha igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi. Uzosebenzisa lawa magama amabili okugcina ukungena ku-akhawunti yakho yekhasino. Ngaphambi kokuvula i-akhawunti entsha, kuzofanele wamukele imigomo nemibandela yekhasino kanye Nenqubomgomo Yobumfihlo. Ungakhetha futhi ukuthi uyafuna yini ukuthola ama-imeyili okuphromotha nama-SMS.
I-Zodiac Bet Casino iku-Facebook naku-Google futhi ungabhalisa ngalezi zingosi zokuxhumana. Ungaduma lapho uwina isizumbulu semali.
Imidlalo Yasekhasino Ye-inthanethi Ongayidlala e-Zodiac Bet Casino
Ngemidlalo yasekhasino engaphezulu kwengu-2 000, ilabhulali yemidlalo ngokungangabazeki ingenye yezici ze-Zodiac Bet eziheha kakhulu. Le midlalo iqukethe ezinye zezihloko ezishisayo, iningi lazo okuyimidlalo ethandwayo. Abanye onjiniyela abaphawulekayo amageyimu abo atholakala ku-Zodiac Bet abandakanya i-Red Tiger,i-iSoftBet,i-Thunderki-ick,i-Novomatic, i-Pragmatic Play, i-Yggdrasil, i-Booming Games,i-Wazdan,i-Evoplay, i-Tom Horn,i-Gamomat, i-Blueprint, i-EGT, kanyene-Fugaso, njll.
Ungangena kulabhulali yemidlalo yekhasino kusuka phezulu ngakwesokunxele kwepulatifomu. Izigaba zemidlalo zihlelwe ngobunono ukuze ukwazi ukungena endaweni yokwamukela izivakashi oyifunayo. Uma ufuna umdlalo othile, kuzoshesha ukusesha ngesihloko. Uma okuthandayo kungonjiniyela abathile, ngamunye unendawo yakhe yokwamukela izivakashi. Okunye okungenhle esikutholile ukuthi awukwazi ukudlala imidlalo ngemodi ye-demo ngaphandle kokuthi une-akhawunti ekhasino. Manje ake sibone eminye yemidlalo ehamba phambili esigabeni ngasinye sekhasino.
Njengenjwayelo, ama-slot maniningi kulabhulali yemidlalo, futhi njengoba kushiwo angamanye ama-reel adlalwa kakhulu ngoba atholakala kumakhasino aphezulu emhlabeni jikelele. Abathanda imidlalo yakudala bangathola imishini yezithelo yabo, ngenkathi kutholakala ama-slot evidiyo anezingqikithi ezahlukahlukene. Imidlalo ephezulu ibandakanya i-Rich Wilde and the Book of Dead Diego El Pibe De Oro Bull in a China Shop Assassin Moon: Hyper Hold, War of Gods, i-Star Bounty, i-Curse of the Werewolf, i-Retro Galaxy, i-Magical Amazon, i-Win-a-Beest, and Prize of Paris, njll.
Imidlalo Yetafula Yakudala Nokuhlukahluka Kwayo
I-Zodiac Bet Casino inendawo enkulu yokwamukela izivakashi yemidlalo yetafula ephethe yizinhlobo nhlobo ze-blackjack, ze-baccarat, ze-roulette neze-poker. Ezinye zazo zibandakanya
I-Atlantic City, i-Classic, ne-European Blackjack Multi-Hand, i-Double Exposure Blackjack, i-Mini Baccarat, i-No Commission Baccarat, i-American Baccarat,i-Bog Win Baccarat, i-Caribbean Stud Pokeri-, Caribbean Hold ‘Em, i-3 Hand Casino Hold ‘Em, i-Pai Gow Poker, i-Roulette enemithetho ye-French, ye-European, neye-American , i-Sic Bo, i-Sic Bo Macau, ne-Pontoon, njll.
I-Poker Yevidiyo ene-Low House Edge
Nakuba isigaba singakhuli kakhulu, i-poker yevidiyo inendawo yayo yokwamukela izivakashi, okwenza kube lula kubathandi be-poker ukufinyelela izinhloboabazithandayo, futhi uhlobo ngalunye lungadlalwa ngezandla eziningi (multiple hands). Ungathola zonke izihloko ezijwayelekile ezinjenge-Jacks or Better, i-Deuces Wild, i-Bonus Deuces Wild, i-Aces & Faces, i-Aces & Eights, i-Tens or Better, i-Joker Poker, i-All American Poker, i-Double Bonus Poker, i-Double Double Bonus Poker, ne-Wild Texas Poker, njll.
Thola Isipiliyoni Sekhasino Esesakhiweni
Imidlalo yasekhasino ebukhoma ikunikeza isipiliyoni esicishe sibe njenge khasino esesakhiweni kusuka nomaphi lapho ukhona. Ungaxoxa ngenkathi ama-croupier akhazimulayo eshova amakhadi angempela, futhi usebenzise amakhono akho kubadlali bangempela ongasoze wahlangana nabo. Ngaphandle kwezinguqulo eziningi ezibukhoma ze-Blackjack, i-Baccarat, i-poker, ne-roulette, ungadlala bukhoma i-Football Studio, i-Dream Catcher, i-Lightning Dice, i-Andar Bahar (In Out in Hindi), i-Dragon Tiger, ne-Live Craps, njll.
Akukho Okujwayelekile Ngale Midlalo
Ibizwa nangokuthi imidlalo esheshayo nekhethekile, imidlalo engajwayelekile ivame ukudlalwa ku imicimbi yomndeni neyenhlalo, kodwa manje sekuyisigaba esijwayelekile sekhasino. Amakhasino anezithameli ezintsha ngenkathi abadlali abangavamile ukudlala bethola amathuba okudlala imidlalo yabo ngemali encane. Uzothola izinhlobo ezahlukahlukene ze-bingo, i-keno, nama-scratch card amaningi. Uzothola neminye imidlalo enengqikithi ye-Wheel of Time, ye-The Incredible Balloon Machine, ye-Astro Legends: Lyra andErion, ne-Pets Go Wild, ukubala embalwa.
Imidlalo ye-TV Enomethuli Obukhoma
I-Zodiac Bet Casino isidlule phambili ngesigaba sekhasino esingajwayelekile. Imidlalo ye-TV iwuhlobo lwemidlalo yasekhasino ebukhoma, equkethe imidlalo ehlukahlukene ejwayelekile, eminingi yayo enabaphathi nabadayisi abaphilayo. Ingabandakanya nemidlalo yamakhadi ejwayelekile efana ne-Bet on Baccarat, i-6+ Poker, i-Bet on Poker, i-Joker Bet, i-War ofElements, i-War of Bets, i-21 Bet, neminye imidlalo ekhethekile ebukhoma efana ne-Dice Duel, i-Keno, nemidlalo enengqikithi efana ne-Wheel of Fortune, ngaphandle kweminye.
Ukubhejela Ezemidlalo Emamakethe Omhlaba Wonke
I-Sportsbook ye-Zodiac Bet Casino ihlanganisa imakethe yokubhejela ezemidlalo yomhlaba wonke equkethe yonke imidlalo edumile emhlabeni njenge-football, ibhola likanobhutshuzwayo, ithenisi, i-badminton, i-volleyball, i-basketball, umjaho wamahhashi, umjaho wezimoto, igalofu, ikhilikithi, i-hockey, i-ice hockey, njll. I-sportsbook ihlanganisa imicimbi yezemidlalo ebaluleke kakhulukanye nemiqhudelwano wompetha beligi emhlabeni enjenge-UEFA Champions League, wonke ama-ATP ne-WTA championships, kubandakanya i-Wimbledon, i-NHL, ama-Cricket Test, i-Formula 1, ne-US Open Golf, njll., njll.
Okwabadlali Abangasoze Babhejele Imidlalo Ebukhoma
Imidlalo edijithali ibikhona cishe iminyaka engamashumi amabili, kepha amakhasino e-inthanethi athatha isikhathi eside ukuwamukela. Imidlalo edijithali iyindlela enhle kubadlali abangakwazi ukulinda imiphumela yemidlalo ebukhoma futhi lapho ungakwazi ukubheja bukhoma. Le midlalo ibandakanya i-Instant Football, i-Instant Horses, i-Instant Greyhounds, i-Instant Velodrome, i-Virtual Golf, i-Max Car Motor Racing, i-(Horse) Racing Roulette, i-Fantastic (Football) League, i-Virtual Football, ne-Platinum Hounds, ngaphandle kweminye.
Iqoqo Elincane Lama-Progressive Acebile
Kuhlala kujabulisa ukunqoba kumdlalo wekhasino, kodwa akukho okungadlula injabulo yokushaya i-jackpot enkulu. I-Zodiac Bet Casino ayikwazi ukukunika inethiwekhi ebanzi yama-progressive yomhlaba wonke onjiniyela abangabalingani bayo abanayo, kepha isengakunika okuningi ongakuthemba. Bheka izinkanyezi zakho ezinenhlanhla ngezihloko ezinjenge-Noble Sky, i-Cash Splash, i-Major Million, i-Treasure Nile, i-Reel Keeper, i-Bounty Raid, i-The Wild Hatter, i-Diamond Blitz, ne-King Kong Cash. Ngesikhathi sokubhala, inani elihlangene lalawa ma-progressives belifinyelela kumanani angu-9.
Zodiac Bet Mobile Casino: I-Zodiac Bet Casino Iqhathaniseka Kanjani Kuselula?
I-Zodiac Bet Casino iyahambisana nawo wonke amapulatifomu amaselula afana ne-Android, i-Windows Phone, i-iOS, ne-Blackberry, futhi ingafinyeleleka cishe kuwo wonke ama-smartphone, ama-tablet kanye namadivayisi e-Mac. I-Zodiac Bet Casino yeselula iwuhlobo oluncane, yize eme mpo, lwenguqulo yepulatifomu ye-PC, elungiswe kancane ukuhambisana nesikrini esincane.
Yonke ilabhulali yemidlalo ihlanganiswe nezinye izixhumanisi ezibalulekile, kubandakanya ingxoxo ebukhoma, kumenyu ye-hamburger ebekwe phezulu kwesobunxele kwesikrini seselula. Kodwa-ke, ukuze kufinyeleleke ngokushesha, ilabhulali yemidlalo nayo ihlala phezulu ngezansi nje kwezinkinobho zoku-‘Bhalisa’ noku’Ngena ngemvume’. Lapho uvula ilabhulali yemidlalo, kuzofanele ukuthi uzule uye eceleni ngezigaba ezahlukahlukene.
Amageyimu eselula akhiwe ngesofthiwe ye-HTML5 yeselula, ehlela kabusha esikrinini esincane ukuze ukwazi ukudlala kunemisindo ezwakala kahle nezithombe ezibukeka kahle. Qiniseka ukuthi unokuxhumeka okuzinzile kwe-inthanethi futhi ujabulele imidlalo efana ne-Book of Ra, i-Gonzo’s Quest, i-Disco Diamonds, i-Holiday Spirits, i-Multi fire Roulette, i-Vegas Downtown Blackjack, ne-Grand Casino Roulette live, njll, njll, njll.
Ngingayidawuniloda Yini i-Bet Casino Kuselula Yami?
Ayikho i-app yekhasino ongayidawuniloda. Amakhasino e-inthanethi awasanikezeli ngama-app ekhasino ongawadawuniloda, agadlalwa engaxhunyiwe ku-inthanethi. Abadlali sebekhetha ukudlala bukhoma ku-inthanethi.
Izindlela Ezivunyelwe Zokukhipha Nokudiphozitha Imali e-Zodiac Bet Casino
Visa Yebo Izinsuku zokusebenza 2-4 Yebo
MasterCard Yebo Izinsuku zokusebenza 2-4 Yebo
Skrill Yebo Emahoreni angu-24 Yebo
Neteller Yebo Emahoreni angu-24 Yebo
EcoPayz Yebo Emahoreni angu-24 Yebo
Trustly Yebo Izinsuku zokusebenza 1-2 Yebo
Giropay Yebo Izinsuku zokusebenza 1-2 Yebo
Sofort Yebo Izinsuku zokusebenza 1-2 Yebo
Euteller Yebo Emahoreni angu-24 Yebo
Rapid Transfer Yebo Izinsuku zokusebenza 1-2 Yebo
Klarna Yebo Izinsuku zokusebenza 1-2 Yebo
Bank/Wire Transfer Yebo Izinsuku zokusebenza 4-7 Cha
Paysafecard Cha N/A Yebo
Ukash Cha N/A Yebo
Interac Cha N/A Yebo
MuchBetter Cha N/A Yebo
Zodiac Bet Casino Imininingwane Evamile
Zodiac Bet Casino Imininingwane Yokuxhumana
Isungulwe: 2020 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: Ayikho. Inombolo Evamile: +44 7399 007 302
Umphathi ngu: Bellona N.V. Umphathi ngu: Bellona N.V. I-imeyili: [email protected]
Ilayisense ngeyase: Government of Curacao Ingxoxo Ebukhoma: Yebo
Inguqulo Yeselula: Yebo Usizo lwe-24/7/365: Yebo
Uhlobo Olungadingi Ukudawunilodwa: Yebo Iwebhusayithi:
Ubuhle Nobubi be-Zodiac Bet Casino
Imidlalo yasekhasino engaphezu kuka-2 000 Ayikho inguqulo yewebhusayithi yaseNingizimu Afrika
Imidlalo ngeye-Microgaming,i-NetEnt, i-Evolution, i-BTG, nabanye onjiniyela bemidlalo abaphezulu abangu-38 Amaphromoshini awanawo amanani nge-ZAR nezinye izinhlobo zemali
Ama-progressive jackpot acebile Ambalwa ama-progressive jackpot
Imidlalo ebukhoma nemidlalo ye-TV Amaphromoshini ambalwa
I-sportsbook yamazwe omhlaba enemidlalo emikhulu kanye nemiqhudelwano Ayikho Ikilabhu ye-VIP
Yini Eyenza Ukuthi I-Zodiac Bet Casino Ikhethwe Kakhulu Ngabadlali baseNingizimu Afrika?
Ilabhulali yemidlalo enkulu futhi ehlukahlukene, esezingeni eliphezulu
Abakhi/Onjiniyela abangu-42 abahamba phambili abangabalingani
Iqoqo lama-progressive cebile omhlaba wonke
Ikhasino ebukhoma nemidlalo ye-TV
I-Sportsbook ebhekele imakethe yezemidlalo yomhlaba wonke
Iyamukela futhi ikhokhe ngeRandi laseNingizimu Afrika
Izikhalo nge-Zodiac Bet Casino Ningizimu Afrika
Amanani ebhonasi awatholakali nge-ZAR nezinye izinhlobo zemali
Ibhonasi eyodwa nje ehlezi ikhona
Ambalwa ama-jackpot akhula njalo (progressive jackpots)
Imibuzo Evame Ukubuzwa FAQs
Ingabe i-Zodiac Bet Casino Isemthethweni eNingizimu Afrika?
Akukho emthethweni ukubheja ku-inthanethi eNingizimu Afrika. Imithetho kazwelonke ayivumeli izindawo ze-iGaming ukuthi zinikeze amasevisi azo kubahlali baseNingizimu Afrika. Kodwa-ke, uhulumeni akanamandla okulawula amakhasino e-inthanethi asebenza ngaphesheya. Iziphathimandla azihlaseli abadlali baseNingizimu Afrika abadlala kulawa makhasino.
Ngiyikhipha Kanjani Imali ku-Zodiac Bet Casino
Kufanele wenze isicelo sokukhipha imali. Kodwa ngaphambi kokwenza kanjalo, qiniseka ukuthi unayo ibhalansi yemali. Akufanele wephule noma yimiphi imigomo yebhonasi futhi kufaneleugcwalise izidingo zakho zokubheja ukuze ukhiphe imali, ngaphandle kokuthi ikhasino ibambe okuwinile. Ikhasino izoqinisekisa lezi zinto ngaphambi kokucubungula isicelo sakho.
Uma konke kuhamba kahle, chofoze u- ‘Khipha Imali’ ekhasini le-akhawunti yakho yasekhasino bese ukhetha indlela yakho yokukhokhwa. Faka inani ofuna ukulikhipha bese ulithumela. Faka imininingwane yakho yasebhange ekhasini lenkampani yendlela oyikhethayo bese ulinda okuwinile ukuthi kufinyelele ku-akhawunti yakho.
Yini i-Zodiac Bet Casino?
I-Zodiac Bet Casino ingumhlinzeki ngokugcwele wekhasino ye-inthanethi kanye nokubhejela ezemidlalo. Inikela ngemidlalo engaphezu kuka-2 000 ehlanganisa izigaba ezahlukahlukene zekhasino, imidlalo edijithali nemidlalo ye-TV yokubheja ngemali yangempela. Ikhasino ine-sportsbook, lapho abadlali bengabhejela khona imidlalo abayithandayo. I-Zodiac Bet Casino inikwe ilayisense nguHulumeni waseCuracao yokuhlinzeka ngalawa masevisi.
Ngubani umnikazi we-Zodiac Bet Casino?
I-Zodiac Bet Casino iphethwe futhi ngeye-Bellona NV, inkampane ebhaliswe ngaphansi kwemithetho yaseCuracao nehhovisi yayo elibhalisiwe e-Heelsumstraat 51, E-commerce Park, eCuracao.
Ingabe i-Zodiac Bet Casino Inezici Zokubhejela Ezemidlalo?
Yebo, i-Zodiac Bet Casino ifaka i-sportsbook yomhlaba wonke esebenzela imakethe enkulu futhi ehlukahlukene yokubhejela ezemidlalo. Imboza yonke imidlalo edumile, uhlelomdlalo, kanye nemiqhudelwano yemidlalo ebalulekile yezwe neyamazwe omhlaba.
Ingabe i-Zodiac Bet Casino Inikeza Uhlelo lwe-VIP?
I-Zodiac Bet Casino ayinalo uhlelo lwe-VIP njengamanje, futhi ayikhangisi uhlelo lwabadlalo abathembekile. Kodwa-ke, kuseyizinsuku zokuqala zekhasino, futhi ingase ihlele uhlelo lwe-VIP kungekudala. Le ndawo izobukezwa ukuze siveze iqiniso elisha uma nalapho lokho kwenzekai.
Ziyini Izidingo Zokubheja Ukuze Ukhiphe Imali e-Zodiac Bet Casino?
Kumele ukudlale imali yebhonasi nemali oyidiphozithile izikhathi ezingu-40 ngaphambi kokuthi ukhiphe noma yikuphi okuwinile emidlalweni oyidlale ngebhonasi.